အဲယားဘတ်စ် A380 ပြင်သစ်လေကြောင်း DOWNLOAD FSX - Rikoooo
အရွယ် 29,3 ကို MB
downloads ရယူရန္ 55 427
Author: ရောဘတ် Versluys, Pasquale Rinaldi အားဖြင့် panel ကိုအားဖြင့်မော်ဒယ်, Cadmus Lee ကအသံ
ဤတွင်ပြင်သစ်လေကြောင်း, အဲယားဘတ်စ် A380 မှမွေးဖွားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်များမှာ! မောင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအာမခံချက်မှတစ်ဦးကိုမှန်ကန်အားရစရာ, ထုံးစံအသံနှင့်တစ်ဦး panel ကိုတိကျတဲ့ 2D မော်ဒယ်ပါဝင်သည်။ စတင်သောအခါအဘယ်သူမျှမကို virtual cockpit သတိပေး, လက်ျာဘက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ click နှိပ်ခြင်းနှင့် 2D လေယာဉ်မှူးအခန်းအမြင် select လုပ်ပါ။
- အောက်တိုဘာလ 30, 2009 တွင်, ပြင်သစ်လေကြောင်း-KLM သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအဲယားဘတ်စ် A380 လက်ခံရရှိခဲ့သည်
- နိုဝင်ဘာလ 20, 2009 တွင်ကုမ္ပဏီဘုတ်အဖွဲ့အပေါ် 380 ခရီးသည်နှင့်အတူပဲရစ်နှင့် New York မြို့အကြားရှိ A538 ၏သမီးကညာကိုပျံသန်းစေတော်မူပြီ။
ပြင်သစ်လေကြောင်းက၎င်း၏ပထမဦးဆုံးအဲယားဘတ်စ် A380, 538 ကီလိုမီတာကျော် 13,000 ခရီးသည်သယ်ဆောင်နိုင်သည့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလေယာဉ်၏ပေးပို့ယူပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အမိန့်အပေါ်တကျိပ်နှစ်ပါးလေယာဉ်၏သုံးအနီးကပ်စတုတ္ထအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်စေမည်အကြောင်း, ယခုနှင့်နွေဦးပေါက် 2010 အကြားပြင်သစ်လေကြောင်းမှကယ်နှုတ်ရလိမ့်မည်။ တွေအတိုင်းရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ 23-2009 စဉ်အတွင်းပဲရစ်-ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, - Charles de Gaulle နှင့် New York မြို့ - 380 နိုဝင်ဘာလ 2009 အပေါ်စတင်ခြင်း, ပြင်သစ်လေကြောင်း A2010 ပဲရစ်အကြားနေ့စဉ်ပျံသန်းမှုအပေါ် operated လိမ့်မည်။
ပြင်သစ်လေကြောင်းထို့ကြောင့်ဒီလူအများထင်မြင်ကြသည်လုပ်ကိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးဥရောပလေယာဉ်တင်သင်္ဘောသည် ဖြစ်. , ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုပထမဦးဆုံးလေကြောင်းလိုင်းကဒီလေယာဉ်နှင့်အတူဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံအကြားအရောင်းအဝယ်ပျံသန်းမှုကိုဆက်ကပ်ရန်။
အဆိုပါ A380 အထူးသဖြင့်ပြင်သစ်လေကြောင်း၏မဟာဗျူဟာကိုကောင်းစွာ-သင့်လျော်သည် ဖြစ်. , ၎င်း၏အရွယ်အစားပဲရစ်မှာလေကြောင်းလိုင်းရဲ့အစွမ်းထက်အချက်အချာတစ်ခုစံပြပွဲစဉ်သည် - Charles de Gaulle ။
ယင်း၏လေး State-Of-The-Art မိသားစုဆရာဝန် 7200 အင်ဂျင်၎င်း၏လေခွင်းအသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကိုပေါင်းစပ်၎င်း၏လေယာဉ်ကိုယ်ထည်အ A380 ၎င်း၏အမျိုးအစား၏ဆုံးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်-friendly လေယာဉ်ပျံပါစေ။
« 1996 ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်လေကြောင်းကဒီလေယာဉ်ပျံများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကုမ္ပဏီရဲ့တောငျးဆိုခမှထွက်ရှိသောသင့်လျော်ကြောင်းကိုသက်သေပြရာရည်မှန်းချက်သတ်မှတ်ချက်အပေါ် A380 ဆည်းပူးရန်၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်အခြေစိုက်» Jean-စိရယျလျ Spinetta, ပြင်သစ်လေကြောင်း-KLM ၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကြေညာ ။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ်များအတွက်တစ်ဦး 380% လျှော့ချရေးရာပူဇော်သက္ကာကိုအနေ A777, ပေါင်းစပ်တဲ့ဘိုးအင်း 200-340 နှင့်အဲယားဘတ်စ် A300-20 ၏ညီမျှသောစွမ်းရည်မြှင့်ကြွား။
«တစ်ခုချင်းစီကို A380 အကျပ်အတည်းကိုဆီးတားဖို့နည်းလမ်းနှင့်အတူကုမ္ပဏီ၏ပံ့ပိုးပေးရာ, ဒီနေ့ရဲ့စိတျဓာတျကစီးပွားရေးရာသီဥတု၌, ယူရိုသန်းတစျနှစျ 12 မှ 15 ကယ်ဖို့ပြင်သစ်လေကြောင်း enable ပါလိမ့်မယ်။ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုစောင့်ရှောက်စဉ်ပြင်သစ်လေကြောင်းထို့ကြောင့်ပင်ကြီးမြတ်နှစ်သိမ့်၎င်း၏ဖောက်သည်ကိုပူဇော်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ပြင် A380 ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို»ကုမ္ပဏီ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကတိကဝတ်နဲ့အညီဖြစ်ပါတယ်, Pierre ၏-Henri Gourgeon, ပြင်သစ်လေကြောင်း၏ CEO ကဆက်ပြောသည်။
- ပင်မကုန်းပတ်ပေါ် 380 အမတ်နေရာ - Affairs-စီးပွားရေး - နှစ်ခုကုန်းပတ်ကျော်ပြန့်နှံ့နှင့် Voyageur-စီးပွားရေး9အမတ်နေရာ - အထက်ကုန်းပတ်ပေါ် 80 ထိုင်ခုံ, La Premier-ပထမဦးစွာ: ပြင်သစ်လေကြောင်းရဲ့ A449 ခရီးသည်သုံးအတန်းပေးထားပါတယ်။ အသီးအသီးသိသိသာသာတိတ်ဆိတ် cabin ထဲမှာ, ပြင်သစ်လေကြောင်း, လေယာဉ်များ၏ကွဲပြားခြားနားတဲ့အဆင့်ဆင့်မှကိုက်ညီချိန်ညှိအလင်းရောင်မှကျေးဇူးတင်စကားတစ်ဦးရင်းနှီးပွော့ဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးထားပါတယ်။ ကအစည်းအဝေးတစ်ခုအမှတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အပန်းဖြေဧရိယာဖြစ်စေ, အသီးအသီးလေယာဉ်ခရီးသည်တွေဟာသူတို့ရဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတှေ့အကွုံအမှန်တကယ်ပျြောမှေ့စတစ်အောင်လိုအပ်သမျှနှင့်အတူထွက်တပ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 22 လေယာဉ်အမှုထမ်းအ 538 ဖောက်သည်အစေခံရန်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ဖြစ်ကြသည်။
အဖြစ်အစောပိုင်း 1996 အဖြစ်, ပြင်သစ်လေကြောင်းဖောက်သည်မျှော်လင့်ချက်ပြည့်မီနိုင်သည့်လေယာဉ်ပျံဒီဇိုင်း, အဲယားဘတ်စ်နှင့် A380 ၏အဓိကပစ်လွှတ်လေကြောင်းလိုင်းများအပါအဝင်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ယူ. , 2003 ကတည်းက၎င်း၏ဆိုက်ရောက်အဘို့ပြင်ဆင်တော်မူပြီ။ ပြင်သစ်လေကြောင်းလည်း, ဒီအသစ်လေယာဉ်မှမြေပြင်စက်ရုံများလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်လေဆိပ်အာဏာပိုင်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့နှစ်ခုစလုံးသင်္ဘောသားများနှင့်မြေပြင်န်ထမ်းလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောချဉ်းကပ်လမ်းပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
အဲယားဘတ်စ် A319-100 ပြင်သစ်သမ္မတနိုင်ငံ FSX & P3D
အဲယားဘတ်စ် A330-300RR FSX
အဲယားဘတ်စ် A330-200 FSX & P3D 2
အဲယားဘတ်စ် A340-300 အိုလံပစ်လေကြောင်းလိုင်း FSX